Paul Brown: zvinopfuura kubvunzurudza, hurukuro | Linux Vakapindwa muropa
Sezvaunoziva, isu tatanga nhevedzano yehurukuro kune vamwe vanhu vakakodzera uyezve kumakambani ari muchikamu. Asi izvi zvave zvakakosha, sezvo, sekutaura kwangu mumusoro, Paul brown Akandikurudzira kuti ndichinje maitiro uye ndiite sehurukuro. Pakupedzisira ndakafunga kuzviita neTeregiramu, iyo inonyatso kupa mhinduro yekuti ini handina kuwana mukana wekuva nevamwe vabvunzurudzo. Ndinovimba iwe unofarira mhedzisiro futi ...
Kana ari protagonist, ini handifunge kuti mharidzo dzakawanda dzinodiwa, asi kana kuchine zvimwe zvisina ruzivo kunze uko, iti Paul brown ndomumwe wevapepeti ve www.linux.com, ndiye muvambi we Linux UK, uye zvakare anonyora pane yake saiti Kurumidza. Uye zvakare, kana iwe ukanyatsoteedzera iyo yese KDE mega chirongwa, zvirokwazvo iwe zvakare uchazoziva kuti iri rinotungamira kwekutaurirana pamwe nekusimudzira. Iwe unoda kuziva zvishoma zvishoma? Zvakanaka, ramba uchiverenga ...
Linux Vanopindwa muropa: Unogona kundiudza chii chakakutora kubva pakuve mudzidzisi weChirungu kuenda kuLinux? Uye chii chako chekutanga kuonana nemahara software?
Paul Brown: Eheka. Akanga agara ari mucomputer anofarira. Ini ndakaronga PDP-8 muna 1979 uye ndakave neCommodore 64 muna 1982. Chimwe chinhu ndechekuti, ndaive wemagazini eLinux nati. Pakatanga magazini yeLinux kudzoka kuma 90s ekupedzisira, ndakashamisika uye ndikavatenga vese. Yakanga yakafanana nehutachiona: kutanga tekinoroji yakandibata, kozoti uzivi. Icho chaive chizaruro chezvakaipa zvese zvakaitika kumakomputa.
Kana rimwe zuva ndakazviwana ndichitsanangurira vadzidzi vangu (muChirungu) zvandakanga ndawana panzvimbo pekushandisa kwePresent Perfect, ndakaona kuti ndaifanira kuchinja mabasa.
LxW: Waive muchina weDEC kubva kune imwe kambani yawakashandira?
PB: Yaibva kukambani yemachira, asi ini ndaisashandira ipapo. Ndaingova namakore 13 bedzi okukura! Ini ndaive kusekondari. Shamwari yevabereki vangu ndiyo yakagadzika uye programmer yegungano rese. Paive nePDP-8 uye PDP-11. Huge junk, iine (yekunze) yakaoma inotyaira saizi yemuchina wekuwacha. PDP-8 yakagadziridzwa neteletypewriter uye unogona "kuchengeta" zvirongwa pamapepa emapepa. Sezvo zvese zvaipisa zvakanyanya, vaive nemhepo inodzora nguva dzese uye waigona kungopinda uine bhachi jena kuitira kuti shinda neguruva rembatya zvisakanganisa michina. Zvese chaizvo fungidziro yesainzi yenguva ...
LxW: Inonakidza kwazvo, ini ndaisaziva nezve mbatya ...
PB: Shamwari yevabereki vangu yakati vaiwedzeredza zvishoma. Asi, tichifunga kuti iyo sisitimu yese yaikosha mamirioni epesetas panguva iyoyo ...
LxW: Iye zvino zvauchataura nezve iwo ekare michina ... handizive kana iwe waona iyo zvinyorwa zveLinux, ndinorangarira kuti baba vaLinus Torvalds vakati muchina uyo mwanakomana wavo waakatanga kusangana nawo nemakomputa wakafambisa kudzidza kwake nekuti zviri nyore. Iye zvino ivo vangave vakaomesesa kunzwisisa kuti unoshanda sei. Unobvumirana nazvo here?
PB: Hongu, asi pane chimwe chinhu. Ini ndinochengeta bhuku reCommodore 64 uye kumashure kune mapuratifomu emagetsi ese mukati. Iwo manyowani aive akazara kwazvo mune zvese: ivo vakatsanangura iyo yese inoshanda sisitimu, kunyorera, uye Hardware. Izvo zvakarasika. Mazhinji emachina anotengwa nevanhu mabhokisi matema, asina chero mapepa. Nepo muma80s vashandisi vakakokwa kuzotenderedza (ivo vakapihwa nzira dzekuita kudaro), ikozvino kune makambani anonyepedzera kukuita kuti utende kuti hazvisi pamutemo.
LxW: Zvizere unobvumirana. Ndosaka mapurojekiti akadai seRaspberry Pi uye Arduino apinda munyika yekudzidzisa zvakanaka, handiti? Ivo vari nyore kwazvo, vakadzokera kunguva idzo neimwe nzira uye iwe ukawana yakawanda zvinyorwa.
PB: Hongu, pachokwadi Raspberry Pi rakagadzirwa nemainjiniya aishanda pamakomputa avo (ma "maikorofoni" sekudanwa kwaaidaidzwa ipapo) ema80. Vakaona kuti kuvhara kweiyo Hardware kwakashandura makomputa kuita anenge midziyo yemumba.
Izvo zvakange zvatora muripo pahunhu hwevadzidzi vaive vachisaina kumabasa ane chekuita nekombuta. Ndokureva, vadzidzi vesainzi yemakomputa ema80s uye kutanga kwema90s vaiziva zvakawanda kupfuura avo vanopinda izvozvi. Uye hazvisi nekuti "nguva dzese dzakapfuura dzaive nani", asi nekuti iyo indasitiri yakafunga kuti zvishoma zvaizivikanwa nemushandisi, zvirinani. Icho idiocy yekombuta yemunhu yakatungamira kune tarenda dambudziko.
Handisi kuti demokrasi uye kurerutsa zvakashata, ziso. Asi ine imwe mhedzisiro isingagone kufuratirwa. Izvo zvakaipa kuviga zviri kuitika mukati kune avo vanoda kuziva.
LxW: Idiotization uye kusavimba, kupfuura zvaunotaura, zvakare mukusavimba maererano nekuchengetedza uye kuvanzika. Iwe hauzive chaizvo zvinoita software, asi kana iyo Hardware ...
PB: Uye izvo zvinotisvitsa kuzvinhu zvakaita seSpecter neMeltdown: zviputi uye kusagadzikana izvo zvave mune masisitimu kubvira ma90s uye kuti vanhu vakaita seIntel vaiziva asi havafanirwe kuzivisa.
LxW: Iwe unofunga kuti Raspi ingadai yakashaiwa yakavhurika CPU futi? Panzvimbo peiyo ARM yepakati IP ...
PB: Hongu. Zvinonditsamwisa chaizvo kuti hatigone kuve ne Hardware uko zvese zvinhu zvakavhurika panguva ino yezana. Iyo iri nyaya yakamirira iyo nharaunda inofanira kugadzirisa.
LxW: Ndapedza makore gumi nemashanu ndichitsvaga microprocessors uye kune zvinonakidza zvirongwa zvakaita seOpenSPARC, OpenPOWER, RISC, ...
PB: Kune akatiwandei mapurojekiti ipapo… Iyo RISC V inoita kunge inovimbisa, asi parizvino iri yakawanda chirongwa kupfuura chero chinhu chipi zvacho. Ini zvakare ndinoziva zvishoma nezve OpenPOWER. Agh… handizive kuti yakavhurika zvakadii. Ini ndinofunga idanho munzira iyoyo, asi kusvikira iwe waona madhirama ese akagoverwa pasi pezenisi rinotenderwa neFSF kana OSI ...
LxW: Kuchinja zvishoma chetatu ... Ko iwe sei iwe uchiona kuwedzera mumavhidhiyo mitambo ine Linux rutsigiro?
PB: Hehe… Iyi inyaya ine zvakare yakasviba. Kune rimwe divi, zvakanaka. Saka vese avo vanoti "handipfuure nemitambo" havachazove nechikonzero. Kune rimwe divi, zano remahara software harisi rekugadzira nharaunda dzinofambisa kugovera software yepamutemo. Izvo zvakada kuita kunge Android, ehe kernel iri yemahara, asi hapana munhu anokanganisa iyo system yemahara system.
Mumwe anoshamisika kuti kune izvo, musiyano upi zvaunoita kana iyo kernel yakasununguka kana kwete? Zvakare sekuti ndiani anoti kana tichava neMicrosoft Office kana Photoshop yeLinux. MHINDURO yangu kune iyo ndeye, 'Ndapota usadaro.' Izvo zvinogona kuuraya mapurojekiti senge LibreOffice, kana GIMP, kana Kirta, ...
Asi ini ndinobvuma kuti chinhu chemitambo chakaomarara. Ini ndinogona kunzwisisa maitiro ekugadzira bhizinesi nehofisi yemahara kana dhizaini software, unogona kugadzira zvinyorwa, kupa makirasi, rutsigiro rwehunyanzvi, asi mune yemahara mitambo yemavhidhiyo ... Ndeapi mamwe mabhizinesi aripo kunze kwekutengesa mutambo?
LxW: Izvi zvinondiyeuchidza nezvekubvunzurudzwa kwatakaita naRichard Stallman, kwaakati: "Kana mumwe munhu akashandisa Visual Studio paGNU / Linux, zvirinani pane kushandisa Visual Studio paWindows, nekuti Windows haichazviendesi." Iwe zvakare unofunga chimwe chinhu chakafanana nezvemavhidhiyo emavhidhiyo ...
PB: Hongu, asi idanho diki rekuwedzera pane vanhu vanofunga. Asi ichiri nhanho. Kutamba mitambo yemahara pamapuratifomu emahara… kwaizove kufambira mberi kwakajeka.
LxW: Uye ikozvino zvatadoma Microsoft, iwe unofungei nezvezvazvino kufamba? Kufanana nekutengwa kweGitHub, kuvhurwa kwemamwe mapurojekiti, iyo Linux-based distro, mupiro nemari uye kodhi yeLinux Foundation, kufamba kwazvino patent… Zvinonzwika zvakanaka, asi kana iwe ukaona Linux Sucks 2018, Bryan Lunduke anoti chimwe chinhu chinopa. kutonhora, nezve zano raMicrosoft rekuparadza kubva mukati: "Gamuchira, Wedzera, Dzima."
PB: Izvo zvishoma zvakaoma kupfuura izvo. Microsoft ikambani hombe. Saka nekudaro haigone kuita zvakanaka kana zvakaipa zvinhu. Izvo anthropomorphizing. Kunge chero kambani hombe, senge IBM, Red Hat, kana chero imwe, varidzi vayo chete ndivo vanotanga kupindura. Zvino zvido zveMicrosoft zvinowirirana (neimwe nzira) neLinux. Hapana chimwe.
Muchokwadi, cherekedza kuti hapana kana rimwe remakambani aya akamboshandisa izwi rekuti "mahara software", vanogara vachishandisa "yakavhurika-sosi", iyo isina hunhu hunoreva. Izvo ndizvo chaizvo: makambani haakwanise kuverengerwa nehunhu. Saka zvinotevera kuti Microsoft inoda Linux kushambadzira kwakachena.
Ngatione, handipokane kuti kune mainjiniya eMS vanoda sosi yakavhurika, uye vari vagari vakanaka munharaunda, asi vachiwira mukunyepedzera kuti kambani, yakawanda mune imwe saizi yeMicrosoft, inogona kuva nemanzwiro kana hunhu, inhema. Chenjera, ini ndinofunga zvakafanana nezveRed Hat, IBM, Samsung, uye chero ...
Zvakare, kana iwe uchifunga saizvozvo, hauzombofa wakaodzwa moyo pavanoita chimwe chinhu chausingabvumirani nacho. Kufunga kushure kwekusimudzira kwavo kunogara kuri nyore: 'Naizvozvi ivo vakakwanisa kuwedzera kukosha kwezviito zvavo'. Ndizvo zvose. Ndiko kururamisa kwese kwaunoda. Ndokusaka vachida kudzorwa kusvika kurufu. Muchokwadi, ini handifunge kuti chero kambani inofanirwa kuzvibvumira kuti ikure uye kuunganidza simba rakawanda seMicrosoft, Google, Apple, Amazon ...
LxW: Hongu zvinosuruvarisa kuti vagovani vanotonga, ini ndaona makambani mazhinji achichinja kosi kunyangwe pamutengo wekuenda pamusoro pevashandi vavo kana mainjiniya nekuda kwekuti mari inofamba ichienda kune chimwe chikamu. Semuenzaniso, ndiri kuzvirangaridza nezvenyaya ye AMD, apo vagovani pavakaona musika unokwanisa wemagetsi-emagetsi uye nharembozha uye vaida kupa zvibodzwa kuita kudzikisa kushandiswa kwesimba uye paive nekutsikirirwa kwevanjiniya vechikoro chekare. Uye izvo zvakakonzera kuti kambani ipfugame pamberi peIntel kudzamara kusvika kweZen, pavanenge vawana zvakanaka vashoma vevakagadziri vakanaka. Asi ndinoshamisika kuti chii chinotanga kuuya, huku kana zai? Ndiri kureva, kuti ava vagovani vafambise tebhu panofanira kunge paine karoti pamberi pavo inovakurudzira kudaro ... Steve Jobs aive mashiripiti pane izvi, achiburitsa chinodiwa ozochishandisa ...
PB: Iwe murume, kuburitsa chinodiwa chingori chipikiso mune mazwi, handiti? Ini handidi kuwana huzivi, asi kuve neiyo iPad hakusi iko kukosha.
LxW: Hongu, asi vanoita kuti iwe utende kuti kana iwe usina, hausi "kutonhorera." Kutaura zvazviri, kune zvikoro zvakawanda zvinoda kuti vadzidzi vazvo vashande nePads uye kwete nepiritsi chero ripi zvaro, zvichimanikidza vabereki kuti vatore mari yakawanda nezvimwe zvinhu zvese izvo zvinosanganisira ... Kana iwe ukatakura tablet yeApple, iwe uchava weirdo wekirasi kana iwe haungatombokwanisa kushanda, iyi ingori mhosva. Kunze kweizvozvo kana iwe ukajaira izvo, ipapo iwe uchazoda izvo ... Kune zvekare zvidzidzo zvinoti iyo iPhone yave chimwe chezviratidzo zveiyo yazvino nhanho nhanho. Uye vanhu vanozviuraya ivo nekuda kwavo ...
PB: ... yemahara software inogona kushandisa zvishoma izvo ... er ... glamour. Uye kuti vanhu vakafunga kuti kuisa Arch kana Debian ndiko kuve tenzi. That it is…
Kumwe kubvunzana mune dzakateedzana:
Red Hat naJulia Bernal
Victor Mayoral kubva kuna Erle Robotics
Francisco Sanz kubva kuThe Security Sentinel
Francisco Nadador, nyanzvi yekuongorora forensic
Manuel Ujaldon anobva kuUMA uye NVIDIA CUDA Fellow Award
Mikel anobva kuMKElectronica
Zvimwe zvinouya ... gara wakatarisana neLxA !!
Ndinokutendai zvikuru nezvose Paul, mufaro… Ndinovimba vaverengi vakawana iyi bvunzurudzo inonakidza. Usakanganwa kusiya yako inotsanangura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Misangano / Zviitiko / Hurukuro » Paul Brown: zvinopfuura kubvunzurudza, hurukuro
Inonakidza kwazvo. Ndatenda
Opera 57 inosvika neNetflix yemukati kurudziro uye nezvimwe